Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha xayawaanka | Shiinaha Pet Comb Factory
Dukaan lagu qurxiyo eeyaha Ey
Shanleydan rakibaadda eeygu waxay leeyihiin ilkaha birta ah ee birta ah ee wareejinaya si tartiib ah ayey u soo qaban karaan dharka hoose ee hoosta ayaa si habsami leh u dhex mari doona dhogorta qallalan iyada oo aan la qabsan oo aan xayawaankaaga raaxo lahayn.
Biinanka shanleyda rakibaadda eey ee lagu qurxiyo waxaa lagu soo saaray cirifyo wareegsan si aysan waxyeello u soo gaarin ama u xoqin maqaarka xayawaankaaga.
Waxyaabaha ku jira eeygan shanleeyaha shanleydu waa TPR. Aad bay u jilicsan tahay. Waxay shanlaynta joogtada ah ka dhigeysaa mid sahlan oo deggan.
Dhameystiray jarista godka dhamaadka gacanta, shanlada eyda eey ku xanaaneyso eey sidoo kale waa la sudhan karaa haddii la doono.Waxay ku habboon tahay timaha dhaadheer.
Bisad Flea Dhar
1. Biinanka xayawaankan bisadaha ah waxaa lagu farsameeyaa dhammaadyo wareegsan si aysan waxyeello u soo gaadhin ama u xoqin maqaarka xayawaankaaga.
2.Soft ergonomic anti-siibi xajin xajmiga bisadan dhogorta ka dhigaysa shanlaynta joogtada ah ku habboon & dabacsan.
Shanleyda bisadan ayaa si tartiib ah u baabi'isa timaha dabacsan, waxayna baabi'isaa isku-darka, guntimaha, boodada, jilayga iyo wasakhda ku xayirmay sidoo kale guurdoonka iyo duugista jaakad caafimaad qabta, kordhinta wareegga dhiigga waxayna ka dhigaysaa xayawaankaaga xayawaan jilicsan oo dhalaalaya.
4.Ku dhammaatay goynta godka dhamaadka gacanta, shanlooyinka bisadaha bisadaha sidoo kale waa la sudhan karaa haddii la doono.
Dharka dharka lagu qurxiyo eeyaha eey
Custom Dog Grooming Comb aroosyada iyo duugista loogu talagalay jaakad caafimaad qabta, Waxay kordhisaa wareegga dhiigga waxayna ka dhigtaa jaakadda xayawaankaaga mid jilicsan oo dhalaalaya. Shanlooyinkayagu waxay ku habboon yihiin dhammaystirka iyo qulqulka.
Ilkaha birta ah ee birta ka sameysan ee aan xasilooneyn ee leh dhamaadka wareega, ma dhaawici doono xayawaankaaga. Ilkaha ciriiriga ah ee timaha wanaagsan ee agagaarka indhaha xayawaanka, dhagaha, sanka, iyo meelaha lugta. Ilkaha ballaaran ee timaha qalafsan ee jirka.
Xakamaynta ergonomic oo leh dusha sare ee caagga ah, daboolka dusha sare ee shanleyda eyga ayaa ka hortageysa shilalka sibiibix ah si aad adiga iyo xayawaankaaga u badbaado.